Qaababka Joornaalka Waa Inaad Ogaataa | Hal-abuurka khadka tooska ah
Maanta waxaan kuu keenaynaa wax ka badan iyo wax aan ka yarayn qaar ka mid ah dahabka taajka ah ee naqshadeynta tifaftirka. Ma ahan wargeysyo aad ka heli doonto qolalka sugitaanka ee dhakhtarka ilkaha, iyo xitaa xaaladaha qaarkood, ama meelaha wargeysyada. Waanu ku bari doonaa qaar muunado joornaal qaabaysan, ururinta majaladaha aduunka ugu qaabaysan.
Liiskan, waxaad ka heli doontaa taxane joornaal ah, kuwaas oo u adeegi doona sida tixraac iyo dhiirigelin marka la abuurayo kala sareynta, qaabaynta, daaweynta labada muuqaal iyo qoraal, isticmaalka wanaagsan ee goobaha, iwm.
1 Layouts magazine ugu fiican
1.3 Hoos u dhig
Layouts magazine ugu fiican
Qaybtan waxaan ku tixi doonaa joornaalka ugu fiican ayaa maanta nakhshad ka bixiya waddooyinka iyo adduunka dhijitaalka ah.
Majaladda TIME waa mid ka mid ah daabacadaha aduunka ugu caansan, waa joornaal leh taariikh garaafeed cajiib ah. Mid ka mid ah walxaha ugu caansan ee daabacaadda ayaa ah qaabka daboolkiisa, halkaasoo jilayaasha qaybta dhexe ee daboolka iyo walxaha ku wareegsan ay taagan yihiin.
Gudaha joornaalka waa a qaab-dhismeedka garaafyada wanaagsan iyo nuxur qoraal ah oo aad u ballaadhan oo si fiican loo shaqeeyay, marka lagu daro naqshadaynta macluumaadka, sawirada, iwm.
Waxaan ka hadleynaa a joornaal casri ah oo ku takhasusay qaab nololeedka, waxaad ka heli kartaa wax kasta oo ka mid ah cunto karinta karinta, warbixinta naqshadeynta gudaha, ilaa maqaal ku saabsan dhismaha baroque.
badarka, waxaa loo yaqaanaa daabacaad aad u nadiif ah oo muuqaal badan, waxay noqon lahayd joornaalka caadiga ah ee aan kaga tagno shelf sababtoo ah way fiicantahay. Waxay soo bandhigaysaa naqshad tafatiran oo aad u qurux badan, sawirro si aan fiicneyn loola dhaqmay kuwaas oo ah jilayaasha bogag badan oo buuxa, iyo sidoo kale meel cad oo taxaddar leh. Joornaal ka soo baxa naqshadaynta afarta gees.
Jot Down waxa ku jira in ka badan 300 bog oo u dhexeeya jaldiyada, waxa loo qaadan doonaa ku dhawaad ​​buug. Habka tilmaamaya majaladda waa isticmaalka madow iyo caddaan iyo naqshad ka muuqata daabacaadda oo dhan.
Boostada oo leh qaabka ugu yar, wuxuu leeyahay qaab aad u taxaddar leh, Infographics-ka ugu awoodda badan marka la eego naqshadeynta, sawir-gacmeedyo kaa tagi doona afkaaga furan iyo qaabka quruxda badan waana sababta Jot Down ugu jirto liiskan mid ka mid ah naqshadaha joornaalka ugu fiican.
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadleynaa Metropoli, waa kabka wakhtiga firaaqada iyo dhaqanka ee uu bixiyo wargeyska El Mundo, si aad midkan ku haysato dukaamada.
Rodrigo Sánchez waa naqshadeeyaha tifaftirka ee garabka daabacaada, sifada ugu badan ee iyaga ka mid ah waa sida dabooladoodu ay ula socdaan mawduuca ugu muhiimsan ee la daaweyn doono.
Yaa aan ogayn ama weligii maqlay joornaalka ganacsiga ugu caansan aduunka. Forbes waxay timid Spain qiyaastii 2013, tan iyo markaas waxay ahayd mid ka mid ah joornaalada loogu iibsiga badan yahay ee wargeysyada.
Naqshadaynta majaladdani waxay sifo u tahay isticmaalka xarfaha waaweyn iyo sanduuqyada qoraalka yar ee daboolkooda, kuwaas oo markii horeba ka mid ahaa calaamadahooda. Gudaha, waxaan ka heli karnaa sawiro si taxadar leh loola dhaqmay, ciyaaraha qorista sida cinwaanada wararka, qurxinta xarfaha qoraalka, palette midabyo kala duwan, iwm.
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa a daabacaadda fanka iyo dhaqanka, oo markii ugu horreysay soo baxday 2009kii. Maroodiga ayaa la soo daabacaa saddexdii biloodba mar, waxaana loo qaybiyaa Yurub oo dhan iyo sidoo kale meelo kale sida China, Korea, Japan, USA iyo Canada.
Maroodiga, waa mid aan la garan karin tayada iyo daryeelka ee faahfaahinta moodooyinka, isticmaalka meelaha bannaan waa mid cajiib ah, marka lagu daro dhammaan daaweynta iyo naqshadeynta gudaha.
Tapas waa a joornaalka gastronomy-ga iyo isbeddellada makhaayadaha, oo u heellan kuwa loogu yeero foodies, kuwa jecel cuntada wanaagsan. Waxay ka tirsan tahay isla kooxdii aan horay u soo aragnay, majaladda Forbes, ee kooxda Isbaanishka.
Tapas, waa daabacaad kaas qaab geesinimo leh, oo madadaalo leh ayaa ka iftiimaya naqshad tifaftiran oo aan fiicneyn. Waxa ay haysataa nooc Isbaanish ah iyo mid kale oo caalami ah.
Waxay ahayd waqtigii daabacaadda ciyaaraha ay ka tageen qaabkan duugoobay, majaladaha sida Panenka ayaa albaabada u furay inay naqshadeeyaan bogaggooda. Waa joornaal, oo aan ka heli karno sheekooyinka kubbadda cagta ee aan ka soo bixin wargaysyada waaweyn ama telefiishanka, kuwaas oo dhamaantood lagu duuduubay qaab tafatir oo ah tayada ugu wanaagsan.
Sannado badan, daabacaadan waxay u adeegtay sidii dhiirigelinta laba qaybood sida naqshadaynta garaafyada iyo xayeysiinta caalamiga ah. Novum, waa joornaal la soo saaro bil kasta oo muujisa sida ugu wanaagsan ee naqshadaynta casriga ah, sawir-qaadista, sawir-qaadista, naqshadaynta shirkadaha, iyo qaybaha kale.
Wuxuu ku dhashay 2016 magaalada Milano, majaladdani waxay ka mid tahay daabacaadaha safarka, boggeeda aan ku arki karno sawiro nagu marti qaadaya in aan safro, waxa u dheer in ay nasiiyaan meelo kala duwan oo meeraha ku wareegsan.
Mid kasta oo ka mid ah nuqullada leh cufnaanta la mid ah, oo ku dhow 300 bog, Sawir-gacmeed, ayaa nagu martiqaadaya mid kasta oo ka mid ah meelaha ay ina tusinayso, iyada oo loo marayo a qoraalka hordhaca ah, khariidad leh iskudubarid iyo warbixin dhamaystiran oo sawiro ah.
Waxaa lagu abaalmariyay 2016, sida mid ka mid ah joornaalada ugu wanaagsan sanadka. Qoraalkan Waxay ku salaysan tahay shay maalinle ah oo u kala qaybiya sidii inay tahay qayb ka mid ah lafaha.
Naqshadeeyaha Sandra Kassenaar ayaa mas'uul ka ah Isku-dubbaridida ugu wanaagsan ee naqshadaynta tifaftirka casriga ah ee mid kasta oo ka mid ah boggeeda, kuwaas oo qoraallo waaweyni ay ka soo baxaan, guud ahaan loo qaybiyo tiirar, oo leh noocyo kala duwan oo muuqaal ah oo buuxa ama laba bog.
Ilaa hadda xulashadayada naqshadeynta majaladaha ugu fiican maanta, hubaal waanu ka tagnay qaar, markaa ha ka waaban inaad noo soo qorto kaas oo ah naqshadaynta joornaalka kuugu fiican, kaas oo u adeega tixraaca mashaariicda naqshadaynta tifaftirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Qaababka Joornaalka Waa inaad Ogaataa